Housing Waiting List and Subsidies (isiZulu)
Gauteng Housing Rental Tribunal Operations
National Home Builders Regulator
Housing Waiting List and Subsidies (Afrikaans)
Housing Waiting List and Subsidies (isiZulu)Currently selected
Housing Waiting List and Subsidies (Sesotho sa Leboa)
Housing Waiting List and Subsidies (Tswana)
UKUFAKA ISICELO SOMXHASO EKWAKHELWENI INDLU
Bhalisa manje bese ulindela elakho ithuba
1. Uyini umxhaso kahulumeni ekwakhelweni indlu?
Umxhaso kahulumeni ekwakhelweni indlu usho imali uHulumeni ahlinzeka ngayo ukusiza labo abadinga ukwakhelwa izindlu. Uhulumeni kabanikezi ukheshe labo okulindeleke ukuba bahlomule. Le mali isetshenziswa ekwakheleni abantu izindlu kuphela.
2. Ngubani ongafaka isicelo somxhaso kahulumeni ekwakhelweni indlu?
Ukufaka isicelo somxhaso ekwakhelweni indlu -
Kufanele ube neminyaka engu-21 noma ngaphezulu kwalokho;
Kufanele ube ngoshadile noma ongashadile, kodwa ube ngumondli wabathile noma kube khona osuhlalisene kanye naye isikhathi eside;
Kufanele ube ngongaqashiwe noma kube wukuthi imali engeniswa abomuzi bonke sebephelele ayibi ngaphezu kuka-R7 000 ;
Kufanele ube yisakhamuzi sakuleli noma ube yisifiki esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi ngokugcwele;
Kufanele ube ngumuntu ongakaze athole usizo lukahulumeni lokwakhelwa indlu ngaphambili; kanti
Kufanele kube ngokokuqala ukuba ube umnikazi wendlu.
3. Usifakaphi isicelo?
Sifake ehhovisi eliseduze nawe lesethilayithi (satellite). UMasipala unezigaba ezibhekene nezokwakhela abantu izindlu. Kuzoba namakhompyutha azogcina imidati yakho kuwo wonke amahhovisi esethilayithi. Amakhompyutha agcinwe emahhovisi esethilayithi azobe exhumene nemidati egcinwe amakhompyutha ezingeni lesifundazwe.
4. Usifaka kanjani isicelo?
Awukhokhi lutho uma ufaka isicelo sokwakhelwa indlu exhaswe nguHulumeni. Yana ehhovisi lesethilayithi eliseduze nawe. Kufanele uphathe lokhu okulandelayo:
Umazisi wakho (ID)
Umazisi wesithandwa sakho (uma kufanele)
Izitifiketi zokuzalwa zabantu obondlayo (abantwana)
Ubufakazi bemali oyingenisayo uma kungukuthi uqashiwe
Kudingeka ubufakazi (njengencwadi efungelwe) uma kungukuthi umndeni wakho uhlanganisa nezinye izihlobo (isibonelo, ingane kadadewenu osashona)
Ungawenza amakhophi alezi zincwadi. Kodwa kufanele afakazelwe yizikhungo ezifanele ukuthi angamakhophi ezincwadi zangampela, ngaphambi kokuba uye nawo emahhovisi esethilayithi. Izikhungo ezingafakazela lezi zincwadi isiteshi samaphoyisa esiseduze noma izinkantolo zezimantshi.
5. Kuthiwani ngabantu abanezidingo ezithile?
Ukwakhela abantu izindlu kusho nokunakekela abakhubazekile. Lapha sisho abantu abanezidingo ezithile, isibonelo, abahamba ngezihlalo zabakhubazekile kanye nalabo abadinga ukufakelwa iminyango ebanzi ezindlini zabo. Olunye ulwazi ngalokhu luyatholakala emahhovisi esethilayithi nasemahhovisi esifundazwe.
6. Sengisifakile isicelo - yini ezolandela?
Uma ufaka isicelo ehhovisi lesethilayithi eliseduze nawe, uzonikezwa ubufakazi bokubhaliswa kwakho, okuyifomu elithile (FORM C). Leli fomu libonisa usuku ofake isicelo ngalo kanye nenamba yalesi sicelo sakho. Thatha leli fomu uye nalo ehhovisi lesethilayithi noma ehhovisi lesifundazwe ukuhlola ukuthi igama lakho liyavela yini ohlwini lwesifundazwe lwalabo asebelindele ukwakhelwa izindlu.. Uma kungukuthi igama lakho liyavela kulolu hlu, kuyosho ukuthi kufanele ulindele elakho ithuba.
Yana njalo ehhovisi lesethilayithi eliseduze nawe noma ehhovisi lesifanduzwe, uhlole ukuthi sekuhambe kangakanani ngesicelo sakho.
Yazisa ihhovisi lesethilayithi uma kungukuthi ikheli lalapho uhlala khona neleposi sekushintshile.
Yazisa ihhovisi lesethilayithi uma kungukuthi isimo sakho ngezomsebenzi sesiguqukile (uma usudiliziwe emsebenzini noma uma kungukuthi usuthole umsebenzi).
Yazisa ihhovisi lesethilayithi uma kungukuthi sekunoguquko emndenini wakho (isibonelo, ukwanda kwesibalo salabo obondlayo).
Yazisa ihhovisi lesethilayithi uma kuba khona izinguquko esimeni sempilo yakho (isibonelo, uma kungukuthi usukhubazekile).
8. Imidati yalabo ongaxhumana nabo
Sanlam Plaza East Building
285 Schoeman Street
Uthelefoni:: 012 358 1167
Mnu B Rathumbu
Uthelefoni: 012 358 1124
Isandla Somphathi: Waiting List and Subsidy Administration
Mabopane/Winterveld 012 358 9737
Ga-Rankuwa 012 358 9862
Hammanskraal/Temba 012 358 9816
Soshanguve/Akasia 012 358 9270
Centurion/Laudium/Laezonia 012 358 3888
Mamelodi 012 358 5546
Pretoria Central 012 358 4315
Atteridgeville 012 358 5003
"Ulwazi lukhulisa impilo yomnikazi wendlu kanye nokuzazi"